Yan Aung: Cbox ထဲက ပြဿနာများ
မောင်ရန်.. ခုလိုလေးရေးပေးတာ ကျေးဇူးကွာ ။ တို့တောင် ကိုဖြိုးအိုင်ပီမှန်းမသိဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ ဘန်းလိုက်တာ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဖြိုးဘယ်တော့မှ အဲလိုမလုပ်ဖူးဆိုတာ တို့တတွေအားလုံး လုံးဝ ယုံကြည်ပြီးသားပဲ ။
ကိုဖြိုးနဲ့ အပြင်မှာ စကားတစ်ခါကြီးများတောင် ပြောဖူးပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်မယ့်လူမဟုတ်မှန်း မြင်တာနဲ့ သိပါတယ်။ ပြီးတော့ အိုင်ပီ အကြောင်းတွေ ရှင်းပြပေးထားတာလည်း ကျေးဇူးပါ။
မောင်ရန့် ပို့စ်ဖတ်ပြီး ကိုဖြိုးဆီမှာပဲကွန်မန့် ပေးလိုက်တယ်။ :)
တော်ပါသေးရဲ့ဗျာ. ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်ဗျ.. အဲလို အပြောခံရတဲ့ထဲမှာ. ဒါပေမဲ့ အိုင်ပီ မဘန်းလိုက်ဘူး.. ဖြစ်တတ်တယ်လေဗျ.. ဘာပြောပြောပေါ့. ကိုယ်တွေစည်းရုံးနေဖို့ လိုတယ်လေ..